संक्रमणको परीक्षणमा तीव्रता खोइ ?
समाज स्वास्थ्य समाचार
सम्झना घिमिरे काठमाडौं,४जेठ
दुवाकोटका बासिन्दालाई अहिले चिन्ताले पिरोलेको छ । ४ दिनअघि आफैँले चिनेको, भेटेको मानिसमै कारोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सोही ठाउँका कार्की थरका एक स्थानीय आफैँमा संक्रमण भइसक्यो कि भन्ने आशंकामा पिराेलिन थालेका छन् ।
संक्रमणकाे आशंकाले निद्रा नलागेपछि उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा परीक्षणका लागि गए । लकडाउन, चारैतिर प्रहरी, साथमा सवारी साधन छैन, सार्वजनिक सवारी साधन चल्न छाडेको झण्डै २ महिना बितिसक्यो । स्वाब टेस्ट गराउन जानकै लागि सवारी हुनेसँग सहयोग मागे । तर, त्यसै तर्केर हिँड्ने गरेको देखेर अमिलो मन लाएर हिँडेरै जाने जमर्को गरे कार्कीले ।
उनी जसोतसो २ घण्टासम्म हिँडेरै जडिबुटीसम्म पुगेपछि भने बल्ल प्रहरीसँगै सहयोग मागेर अस्पतालसम्म पुगे । अब संक्रमण छैन भन्ने रिपोर्ट लिएर ढुक्कसँग घरमा बसौँला भन्ने सोचेर अस्पताल परिसरमा पुगे । अस्पताल परिसरमा घाममा ३ घण्टासम्म लाइनमा बस्दा पनि पालो नआएपछि भने उनी परीक्षण नै नगरी घर फर्के । फर्किंदा पनि उस्तै सास्ती । परीक्षण गर्न जाँदा दिन त्यो तर परीक्षण भएन ।
४ दिनभन्दा बढी भइसकेको थियो उनी पिरोलिएको पनि तर आज भने उनलाई आशा जागेको छ, परीक्षण गर्न पाएर ढुक्क भएर घरमा बस्न पाइन्छ भनेर । उनी भन्छन्, 'भोलि पसलेहरूको परीक्षण हुँदै छ अरे, अब उनीहरूलाई लागेको रहेछ भने त्यसपछि घरमै आएर हाम्रो पनि परीक्षण गर्छन् रे ! यतिका दिन चिन्ता लिएको थिएँ । अब केही दिन पर्खिऊँ ।'
त्यसो त सोही स्थानकी शिवमाया राई पनि कतै कोरोना त लागेन भन्ने चिन्ताले छट्पटाएकी छन् । २ छोरा काखमै रहेका राई काम गर्न जाँदा भेट्यो कि भन्ने आशंकाले पिरोलिएकी छन् । उनले पनि अस्पताल जाने जमर्को नगरेकी भने होइनन् तर कसैले अस्पतालसम्म पुग्न सहयोग नगरेकाले उनी सशंकित बन्दै घरैमा बसिरहेकी छन् ।
श्रीमान २ वर्ष अगाडि नै बितेकाले राई आफैँ मजदुरी गरेर घरको गुजारा गरिरहेकी छन् । अहिले पनि उनी नजिकैको निर्माणाधीन घरमा मजदुरी काम गरिरहेकी छन् । आशंका लागेपछि घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर बताउँदा उनी भन्छिन्, 'बसेर के गर्नु कसैले खान दिने होइन । कोरोना लागेकै रै'छ भने त अस्पताल लान्थ्यो । छोराछोरी पनि कसैले राख्ने थिए । भोकै त मर्दैनथे । तर, परीक्षण नै नभई डराएर हात बाँधेर घर बस्न त सकिन्छ मुख बाँध्न सकिँदै के गर्नु ?'
उनी भन्छिन्, 'बरु हाम्रो गाउँ पर्सामा घरघरै गएर कोरोना जाँच्यो रे, हामीचाहिँ बाँच्न शहर आएको, यहाँ त बाँच्न नि नपाइने जस्तो छ । क्वारेन्टाइनमा बस्न कि त खाने कुरा दिनुपर्‍यो नभए परीक्षण भए पनि त गर्नुपर्‍यो ? खोइ कहाँ छ सरकार ?'
पहिलो चरणमा सिधा सम्पर्कमा आएकाहरू र पसलेहरूको परीक्षण गर्ने वडाको तयारी छ । कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको खण्डमा दोस्रो चरणमा शिवमाया जस्ता अन्य सर्वसाधारणको परीक्षण गरिने योजना छ । तर, शिवमाया भने आफ्न‍‍ो नाम नटिपेकामा रुष्ट छन् । उनी भन्छिन्, 'देखियो भने पनि गर्लान् कि नगर्लान् ! हामी जस्तोलाई कसले हेर्ने र ?'
संक्रमणको पुष्टि भएका क्षेत्रमा सबैको समस्या उस्तै छ । दुवाकोटवासी सबै आफूू पनि संक्रमित हो कि भन्ने आशंकाले त्रसित छन् । हुन पनि किन नहुन् ती सशस्त्रका संंक्रमित जवान १ नम्बर वडाकै सरस्वतीखेल निलवाराही सशस्त्र गण र छेउछाउका स्थानमा डुलिरहेको सबैले देखेका थिए ।
यसरी संक्रमित सम्पर्कमा आएका स्थानमा न त भीडभाड कम गराउन प्रहरी जवान भेटिन्छन्, न स्वाब परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरू नै । यता, आशंका लागेरै अस्पताल जान चाहने सर्वसाधारण पनि अस्पतालसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।
जनता त्रासका बीच जीवन जिउन बाध्य छन् भने केही लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै चोकचोक र बाटाहरूमा जमघट गरेरै वीरता देखाएझैँ गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई रोक्न कुनै प्रहरी जवान सडकमा देखिँदैनन् ।
दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वताका घण्टामा २ देखि ३ गाडी प्रहरी गस्तीमा देखिने यस क्षेत्रमा लकडाउनका समयमा भने प्रहरी जवान देख्न पाइँदैन । मुख्य चोक अर्थात् सरस्वतीखेल चोकमा २-३ जना प्रहरी जवान देखिए पनि अन्य स्थानमा खुलेआम सर्वसाधारण हिँडडुल गरिरहेका छन् ।
यता, चाँँगुनारायण नगरपालिकाका उपमेयरसँग बुझ्दा संक्रमित परिवारका ९ जना सदस्यको परीक्षण गरिसकेको जानकारी दिइन् । उपमेयर बिना बाँस्तोला भन्छिन्, 'हामीले भोलि सय जनाको कारोना परीक्षण गर्दै छौँ, त्यसका लागी १ नम्बर वडाका वडा अध्यक्षबाट नाम टिपाएर परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ ।'
त्यसका लागि सूचना सम्प्रेषण गरिसकेक‍‍ो उनको भनाइ छ ।उपमेयरले सूचना सम्प्रेषण गरिसकेको बताउँदा सोही वडाका सर्वसाधारणलाई कोरोना परीक्षणको कुनै जानकारी नै छैन ।
वडा अध्यक्ष राजेश खड्काले भने केही पसलवाला र केही सोझै सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी गरेर भोलि स्वाब परीक्षण गरिने बताएका छन् । उनी भन्छन्, 'सबैलाई जानकारी दिएका छैनौँ । पहिलो चरणमा हामी सडक छेउका पसलेहरूको परीक्षण गर्नेछौँ । यदि परीक्षण गर्दा कोहीमा संक्रमण देखिएको खण्डमा मात्र दोस्रो चरणमा स्वाब परीक्षण गर्नेछौँ ।'
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ४, २०७७, १२:२९:००
साग बेचेर इन्जिनियरिङ पढाएको छोरालाई कोरोना लागेपछि...
टान अध्यक्ष खुम सुवेदीका ४ कमजोरी
बाँच्नुपर्छ भनेर आफैँले मनाेबल बढाएँ